Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Peratra fitetezana miafina any India: Quaint Jaisalmer
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Forts Hill ao Rajasthan Jaisalmer
Jaisalmer dia tanàna sisintanin'ny tantara an-tsokosoko ao amin'ny State of Rajasthan miloko any India.
Jaisalmer dia manana manintona maro, toy ny hita nandritra ny hetsika tamin'ny 29 Jona 2021.
Ny hetsika nataon'ny PHD Chamber of Commerce, toerana izay niresahan'ireo mpandahateny - na ny tompon'andraikitra na ny hafa - tamim-pifaliana ny tanàna mimanda, eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Pakistan.
Nilaza ireo mpandahateny fa be ny tolotra omen'ny tanàna ireo mpizahatany, na ny eto an-toerana na ny any ivelany.
Nasongadiny ihany koa fa misy ny fanamby sy ny olana atrehin'ilay tanàna manan-tantara izay manakana ny fitomboan'ny fizahan-tany. Fa ny teboka miampy aloha.
Maha tanàna sisintany, Jaisalmer manolotra fotoana hijerena ny lafiny hafa amin'ny fiainana any India. Ny hery fiarovana amin'ny sisintany miaraka amin'ny fanatrehany dia manome betsaka ho an'ny mpitsidika mankafy.
Ny faritra dia misy trano fisakafoanana mahafinaritra sasany, izay izy irery no mahasarika mpitsidika. Faharoa, misy tempoly malaza 7, saingy vitsivitsy ihany no omena dokambarotra. Ny faritra efitra any amin'ny faritra ihany no fantatry ny olona fa tsy ny farihy. Ny lakandranon'i Indira Gandhi mihitsy dia manolotra fety ho an'ny maso.
Ny vorona mpifindra-monina dia sary manintona iray hafa ihany koa toy ny asa tanana sy asa tanana 20 mahery izay nanome asa ireo mpanao asa tanana eto an-toerana.
Saingy, ankehitriny, ny lafiny hafa amin'ny fefy, toa izany.
Ny fifandraisana dia olana lehibe eo amin'ny faritra, miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsy mikarakara matetika ny tanàna misy hotely tsara maro tonga. Andian-tsarimihetsika maromaro no tonga tamin'ny trano fandraisam-bahiny tao an-tanàna, toy izany koa ny mponina ao an-toerana, ao anatin'izany i Bhim Singh, izay mpilalao lehibe mikarakara mpizahatany avy lavitra na lavitra.
Faharoa, misy teboka iray monja avy ahafahan'ny olona mahita ny sisin-tany, raha mety hisy 4. Ny famerana ny fivezivezena any amin'ireo faritra ireo dia manelingelina ny mpizahatany ihany koa.
Ny fanadihadiana arkeolojika an'ny India (ASI) dia masoivohon'ny governemanta indiana mifamatotra amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina izay tompon'andraikitra amin'ny fikarohana arkeolojika sy ny fitehirizana sy ny fitehirizana ireo tsangambato ara-kolontsaina ao amin'ny firenena. Ny ASI dia voampanga ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny tanàna velona any Jaisalmer, saingy hatreto dia nanakana ny fivoarana tamin'ny tsy famelana na dia kely aza, fanovana ao amin'ireo trano, izay mitaky fanamboarana maika.
Ny UNESCO koa dia naneho fahalianana amin'ny anjara birikiny amin'ny fitazonana ireo manintona tokana an'i Jaisalmer. Ohatra, na dia natolotra ho fankatoavana ny Komitin'ny vakoka eran-tany amin'ny taona 2018 aza, ny drafi-pitantanana ho an'ny Jaisalmer Fort dia mbola tsy nomena hanomezana famerenana ary miandry ny fanapahan-kevitry ny UNESCO.